Wasiirkii Arrimaha Gudaha ee Xukuumaddii hore ayaa rajo xumo ka muujiyay in bisha Agosto ee soo socota in dalka doorasho ka dhacdo – STAR FM SOMALIA
Wasiirkii Arrimaha Gudaha ee Xukuumaddii hore ayaa rajo xumo ka muujiyay in bisha Agosto ee soo socota in dalka doorasho ka dhacdo
Maamulka Magaalada Marka & Taliska AMISOM oo ka shiray la dagaalanka Al-Shabaab
Booliska Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ka dhacay Muqdisho
Iska Horimaad Saakay Ka Dhacay Degmada Hodan.
Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi Oo Laga Dalbaday Soo Gudbinta Liiska Xildhibaanada Aqalka Sare.
Rooble Oo Kulan Laqaatay Safiirka Cusub Ee Midowga Yurub.
Xildhibaan C/llaahi Goodax Barre oo horay u soo noqday Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Xukuumaddii hore ayaa rajo xumo ka muujiyay in bisha Agosto ee soo socota in dalka doorasho ka dhacdo, xaalada amni ee dalka oo sii xumaanaya.
Mr Goodax ayaa sheegay in tan iyo bishii June ee sanadkii hore ay Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay soo baneeyeen deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolada dalka.
“Waxaa laga hadlayo waa xaalada guud ee dalka, bishii June illaa iyo hada ciidamada waxay soo baneeyeen aagaga aad u waa weyn, waxaana culeys saaran yahay degmooyinka qaar, waxaa uu weerar ku socdaa Muqdisho, waxaa warbixin ku heynaa in June illaa iyo hada Muqdisho ka dhaceen illaa 64 qarax, dilal iyo hoobiyeyaal lagu soo tuuray”ayuu yiri C/llaahi Goodax Barre.
Xildhibaan Goodax ayaa ku baaqay inay muhiim tahay in amniga laga shaqeeyo, isla markaana uu dhaco is bedel xaga amniga ah sida uu hadalka u dhigay.
“Aniga iima muuqato saan saan Amni ee lagu gaari karo bisha Agosto inay doorasho dhacdo, yaana been la isu sheegin, xaalada amni ee lagu jiro dalka is bedel lagama yaabo inuu dhaco”ayuu yiri Xildhibaan Goodax.
Hadalkan ka soo yeeray Xildhibaan Goodax ayaa ku soo beegmaya, iyaddoo muddo shan bilood ay naga xigto, xilliga la qorsheeyay in dalka ka dhacdo doorasho, waxaana dowladda waqtigeeda sii dhamaanaya laga sugayaa inay soo bandhigto qorshayaashii lagu gaari lahaa doorashada soo socota.
Kulan albaabada u xiran oo Xildhibaanada u socda iyo R/Wasaaraha oo goob joog ka ah
Wasaaradda A. Gudaha oo sheegtay in Guddoomiyeyaasha degmooyinka lagula xisaabtamayo Amniga
Guddoomiyaha Maamulka Magalada Marka ahna gudoomiyaha gudiga amniga gobolka Shabellaha Hoose Cabdulalahi Cali Axmed Waafow ayaa shir la qaatey Saraakiisha ugu sareyso Ciidanka AMISOM ee degaanka lambar konton iyo Saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Shirka ayaa si wadajir u shir gudoomiyeen Gudoomiyaha iyo Taliyaha Ciidanka Difaaca Ugandha ee UPDF ee degaankaas Maj Godfrey rwija ayaa waxaa diirada lagu saaray Amniga Magaalada Marka iyo degaannada kale.
Shirka waxaa goobjoog ka ahaa Saraakiisha Ciidanka dowladda oo isugu jiray horinta gurmadka 14 Octoober, Saraakiil Ciidanka Gor-gor ku socotay iyo Saraakiisha Ciidanka ilaalada degaanka
Inta shirka uu socdey ayaa waxaa inta badan looga hadley xaalada amni degaanka sidii wax looga qaban lahaa iyo Sidii loo fulin lahaa howlgallo ka dhan ah Uturka Al-Shabaab.
Gudoomiye Waafow iyo Taliye Rwija ayaa Saraakiisha Ciidanka dowladda ka dhageysteen xogaha amni ee ay haayaan iyo taatikooyinka loo dajin karo howlgallada la fulin doono.
Maj Godfrey rwija ayaa Ciidanka kula dardaarmey kala danbeynta iyo u dhimashada Qarannimadooda Soomaaliya iyo sido kale sidii Al-Shabaab looga saari lahaa degaanada ay kaga sugan yihiin Gobolka Shabellaha Hoose.
Gudoomiyaha Maamulka Magalada Marka Ahna Gudoomiyaha gudiga amniga gobolka Shebellaha hoose Cabdulalahi Cali Axmed Waafow ayaa ugu danbeyn sheegey in isku xirnaan hadii lagu dadaali waayo ay dhacayso tafaraaruq iyo in ummadii amnigooda la kafaalo qaadey lagu fashilmi karo masuuliyadaas.
Magaalada Marka iyo degaannada hoostaga ayaa waxaa mararka qaa lr ka dhaca weeraro iyo qaraxyo lala beegsado Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in dhinacyadii Maanta ku dagaalamay magaalada Muqdisho ay ahaayeen laba maleeshiyo beeleed oo isku qabsaday dhul ku yaal agagaarka Isgoyska Banaadir.
Afhayeenka oo Warbaahinta kula hadlay Goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in Ciidamada Booliska ay ku baxeen dhinacyadii dagaalamay, sidoo kalena dhulka lagu dagaalamay ay dacwadiisa taallo Maxkamadda Gobolka Banaadir.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in ay Ciidamada Booliska gacanta ku hayaan dhulkii lagu dagaalamay, si loo sugo amniga dadweynaha iyo goobaha Ganacsiga.
Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed faah faahin rasmi ah kama bixin khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dagaalka, waxaana dib u billowday isku socodka dadka iyo Gaadiidka.
Khasaaro Nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay dagaal Ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo isugu jira Booliska Haramcad iyo Millateri Maanta ku dhex-maray agagaarka Isgoyska Banaadir iyo wadooyinka ku hareereeysan.
Dagaalka ayaa waxaa la sheegay in uu salka ku haayay dhul ku yaalla agagaarka isgoyska Jowhara oo labada dhinac ee dagaalamay mid kamid ah ay doonayeen inay dhistaan, balse dhinaca kale ay kasoo horjeesteen, isla markaana la isku heysto dhulkaas.
Warar kala duwan ayaa waxaa ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaalka, waxaana wararka la helay ay sheegayaan in dhaawacu uu gaarayo ilaa Shan Ruux oo kala ah, Taliyaha Ciidanka Haramcad Cabdixamiid Cabdullaahi Fanax, Taliye kuxigeenka Saldhiga Booliska Dharkeenleey Cabdi Malaaq.
Sidoo kale waxaa jira khasaaro hantiyadeed oo ka dhashay dagaalka kadib markii rasaasta ay isweey daarsanayeen labada Ciidan ee dagaalamay ay ku dhacday goobo ganacsi, waxaana Goobjoogayaal ay sheegeen in Goobo Ganacsi ay burbureen.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in halka uu dagaalka ka dhacay uu tegay Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole, isla markaana uu geeyay Ciidamo goobihii lagu dagaalamay.
Wararka na soo gaaraya ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada haatan ay tahay mid degan, isla markaana isku socodka dadka iyo Gaadiidka oo markii hore istaagay ay si caadi ah u Shaqeeynayaan.
Guddoomiye Barlamaanka Oo Maanta kulan la Qaatay Safiirka cusub ee Sweden.
Maalintii Labaad Oo Lagu Wada in Ay Ka Qabsoonto Doorshada Magaalada Jowhar.
Turkiga Oo Ka Hadlay Qaraxii Ka Dhacay Magaalada Muqisho.
Rooble Oo Ka Jawaabay Gudigii Uu Magacaabay Madaxweyne Farmaajo.
Muuse Suudi Oo Mar Kale loo Doortay Senator Aqalka Sare Ee Hirshabeele Matala.
Madaxweyne Farmaajo Oo Waraaqadaha Aqoonsiga ka Guddoomay Danjiraha Sweden(Sawirro).
Doorashada Xubnaha Aqalka Sare Oo Maanta Ka Bilaawanaysa Magaalada Jowhar.
Madaxweyne Farmaajo Oo Gudi U Magacaabay Kiiskii Ikraan Tahliil.
Maxamed Xuseen Rooble Oo Qaabilay Wafdi Ka Socday QM
Madaxweyne Farmaajo Oo Qaabilay Wafdi Ka Socdo Qaramada Midoobey.
Ciidanka Xooga Dalka Ee DANAB Oo Degaano kala Wareegay Al-Shabaab.
Dad Loosoo Qabqabtay Dilkii Lixdhibaankii Deegaanka Laascaanood.
Xubin Ka Mid Ah Maamulka Laascaanood Oo Xalay La Dilay.
Wararkii ugu Danbeeyey Shirkii Rooble iyo Farmaajo.
Taliska Ciidanka xoogga oo soo bandhigay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay
taliyaasha ciidamada qalabka sida oo kulan ku yeeshay magalada muqdisho
madax weenihii hore somaliya oo ka hadlay khilaafka Farmaajo iyo Rooble & kiiska Ikraan Tahliil.
Madaxweynaha Uganda oo sheegay in uu Ciidamadiisa kala baxayo Soomaaliya
Barnaamijyada6 months ago
Barnaamijyo Maalinle6 months ago